Ị ga-eji ya: iOS 9 ga ugbu a Sochie mmekọahụ?
Dubbed dị ka otu n'ime ndị kasị controversial Nkea site Apple na-adịbeghị anya ụfọdụ, ụlọ ọrụ emewo kpebiri inyere gị soro gị na inwe mmekọahụ. Dị ka akụkụ nke upgrades na iOS9, HealthKit ga ugbu a ekwe ka ọhụrụ ụdị data si mpụta ngwa, na ebe a bụ ihe ọ pụtara maka gị.
Mgbe tupu mgbe ahụ Health ngwa anakọtara ozi na ebe ndị dị ka "Fitness", "Nutrition", "Ụra", ihe ndị mmadụ bụ ndị ezi ala nkekọrịta ọmụma on, e nwere ugbu a ọhụrụ Atiya akpọ "Reproductive ike".
The ngalaba yiri ka lekwasịrị anya ọzọ na ụmụ nwanyị omumu ike, dị ka ìhè si dị iche iche nke data ya-enye gị ohere store- cervical imi Ogo, ịhụ nsọ, Ovulation ule results wdg Nke a bụ prediktebul, dị ka ụlọ ọrụ emewo mbụ e katọrọ maka eleghara ya nwanyị n'ji isi. Ị ga-enwe ike ịbanye ụbọchị gị okirikiri amalite, ọbara eruba na ndị ọzọ niile na mkpa na ozi. Site na ndabara, data ga-nọ onwe ma ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike izipu ozi ahụ iji dọkịta gị, ma ọ bụ mahadum maka ebumnuche nyocha, anonymously n'ezie.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị jara a aga site Apple, na-akpọ ya obi ike na-enye aka ruo n'ókè nke na ọ na-enyere ụmụ nwaanyị soro mgbagwoju akụkụ nke ha omumu ike. Ha na-eche na ọ dịla a ogologo oge na-abịa, na Apple nwere ike ahụwo a akụkụ nke ya-eguzosi ike n'ihe na-akwado isi defecting, nwere ya nọ na-eleghara ihe dum okike mkpa soro ha ike. Mgbe a ole na ole dubbed ya dị ka nnoo abaghị uru, na-eche na Apple emewo otu nzọụkwụ ọtụtụ na ya biakwa obibia aka ya ọrụ ahụ ike.
Ọzọ karịa nke a, Apple nwekwara gụnyere achọghị ịzụ obere controversial ngalaba dị ka a "UV ikpughe" nhọrọ na ndekọ na tracks gị UV Index fim na a ọnụ ọgụgụ nke 0 12. Ọzọ nhọrọ ndị HealthKit ugbu a na-enye gị bụ soro gị mmiri oriri. Ị ga-otu nhọrọ iji họrọ unit ị chọrọ iji; Otú ọ dị, na beta version, nanị nhọrọ nke 'millimeters' dị. Nkea e n'ụzọ dị ukwuu hụrụ na-a-akwado site na a ọtụtụ n'ime-eguzosi ike n'ihe Apple ọrụ, dị ka ọtụtụ nwere na-eji iche iche ngwa soro n'elu. Na Nsonye atụmatụ ndị a na HealthKit onwe ya, ọ ga-aghọ ihe ndị ọzọ ga-adaba adaba n'ihi na ọrụ na-elekọta ahụ ike ha. Dị ka anyị na-ahụ n'okpuru ebe a, data nwekwara ike na-akọrọ ndị enyi, ma ọ bụ dọkịta gị ma ọ bụ onye ọ bụla ị chọrọ ịkọrọ ya.
Ma ihe n'ezie na-ejide onye ọ bụla anya bụ nke abụọ button na ala ị na-ahụ ke akpa screenshot- 'mmekọahụ'. Ugbu a tupu anyị na-enweta n'ime ihe anyị na-eche banyere nke a nkwaghari, ka-esi na maara ihe ọ bụ ihe niile banyere. Ọ bụ ezie na e nwere otutu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọahụ Smartphone ngwa, nke a mma bụ ihe pụrụ iche dị ka ọ bụ iji na-elekọta gị mmekọahụ ọdịmma.
Ọhụrụ atụmatụ nwere ike soro:
Olee otú ọtụtụ ugboro n'ụbọchị
Na kpọmkwem ihe oge
Na kwa otú ị inwe mmekọahụ.
Ị nwere ike soro gị mmekọahụ ogologo oge ka ị chọrọ, ngwa ga-eme ka n'aka na ị maara otú ọtụtụ ugboro na ị na nwere mmekọahụ na n'oge gara aga izu, ọnwa, ma ọ bụ afọ. E nwekwara otu nhọrọ na-ajụ gị ma ọ bụrụ na ị na-eji nchebe n'oge mmekọahụ ma ọ bụ. Na N'ezie, ị nwere ike ịkekọrịta data, ọ bụ ezie na anyị na-adịghị n'aka a ọtụtụ ndị ga-ahọrọ ime otú ahụ. Ozugbo ị jupụtara ke ofụri mkpa data, ngwa ga-egosi ya na a space gụpụta ma ọ bụ na a chaatị, dị ka o na-eme na ndị ọzọ na edere. Gị mmekọahụ ndụ na a chaatị, dị nnọọ mgbe i chere ọ dịghị ihe pụrụ wutere gị ego ọzọ.
Nke a update e zutere na otutu weere reviews na mmadụ mgbasa ozi, na ọtụtụ ndị na-azọrọ na ọ ga-abụ na-ewu ewu na Apple n'ji isi. Echiche nke na-eji ihe ngwa icheta otú mgbe onye nwere mmekọahụ yiri uche na-adịghị ha, na ụfọdụ kwupụtara nchegbu nke ozi-ahụwo site onye ọzọ.
Abanye data dị ka onye dị ka na na ekwentị gị, ọ bụ naanị eke n'ihi na ndị mmadụ na-echegbu onwe banyere ya; ma Apple na-ekwu na ọmụma ga-kpamkpam onwe, na otu onye nwere ike igbachi ha na ekwentị. Ọtụtụ ndị na-ka na-eche ịhụ ihe ụdị sub ngalaba ọ ga-ebu: Ma ọ ga-ekwe ka i soro orgasms, ma ọ bụ ego nke calories ị ọkụ mgbe ke bed na ndị ọzọ na ndị dị otú ahụ parameters tupu enye a nyochaa nke ọhụrụ melite. Mgbe e nwere ndị ka ndị ọzọ ụtọ maka daring aga, na-azọrọ na ọ bụ banyere oge anyị smart igwe kwere ka anyị na-elekọta anyị mmekọahụ ike. Ịhụ otú update n'ezie n'ego ụgbọ na iPhone ọrụ, anyị ga-dị nnọọ-echere ma na-ekiri.
Otu Pịa ịgbanwee si iOS ka Samsung
Otú nyefee Data si iOS Devices ka Sony Smartphone
Otú nyefee Data N'etiti iOS Devices (site iOS ka iOS)
Otú nyefee Data si iOS Devices ka Google Nexus
Olee otú Hichapụ Facebook ozi Ozi na iOS
5 Ihe ị ga-eme Tupu upgrading ka iOS 8
Olee otú Hichapụ Songs on iOS 6 ozugbo
> Resource> iOS> Ị Ga-Jiri ya: iOS 9 ga-ugbu a Sochie mmekọahụ?